काठमाडाैं हल्लिने गरी फेरी भूकम्पको कडा धक्का महसुस, कहाँ हाे केन्द्रबिन्दु ? — Sanchar Kendra
१एमालेसँग पार्टी बिभाजनको रहस्य खोल्दै नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए यस्तो प्रतिक्रिया, ओलीले के भने ?
२तीन करोड चिनियाँ केटाहरुले विवाह गर्ने केटी नै पाएनन्, यस्तो छ कारण
३चितवनका अस्पतालमा आज थप ११ कोरोना संक्रमितको मृ’त्यु
४सिंहदरबार गेटैमा मन्त्री र उपसचिवको गाडी ठोक्किए, ट्राफिकले के गर्यो कारवाही ?
५आइसाेलेसनमा बसेका प्रधानामन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापालाई कसले दियो श्रद्धाञ्जली ?
६प्रधानमन्त्रीको शपथविरुद्ध सर्वोच्चमा ४ रिट दर्ता
७नेपालमा पनि देखिन थाल्यो चक्रवातकोे प्रभाव
८समयमा नै दोस्रो डोज खोप नपाए के हुन्छ ? यसो भन्छ डब्ल्यूएचओ
९भारतमा नयाँ संक्रमितको संख्या २६ दिनयताकै कम
१०म्यानमारमा सेनाको दमनबिरु’द्ध लड्न बन्दुक बोकिन् यी सुन्दरीले
११इजरेल-प्यालेस्टाइन यु’द्धमा आइतबार सबैभन्दा घा’तक दिन, सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठक बस्दै
१२कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्यामा नेपालले चीनलाई उछिन्यो
काठमाडाैं हल्लिने गरी फेरी भूकम्पको कडा धक्का महसुस, कहाँ हाे केन्द्रबिन्दु ?
काठमाडौं । काठमाडाैंसमेत हल्ल्िनेगरी दोलखामा बिहीबार साँझ भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। दोलखाको जुगु आसपास केन्द्र बिन्दु बनाएर साँझ करिब ५ः२५ बजे ४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका प्राविधिक सहायक राजेश शर्माले जानकारी दिए । दोलखामा गएको भूकम्प २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्पकै पराकम्प रहेको उनले बताए ।
यसअघि बुधबार विहानै नेपालमा फेरि शाक्तिशाली भूकम्प धक्का महशुश गरिएको थियाे । सुदूरपश्चिममा आज बिहान भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको हो । भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका टेक्निकल असिस्टेन्ट तीर्थराज दाहालका अनुसार चार दशमलव दुई रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो ।
बिहान ९ः४८ बजे गएको उक्त भूकम्पको केन्द्रविन्दु दार्चुलाको सुनसेरा आसपास रहेको जनाइएको छ । भूकम्पले गरेको क्षतिबारे कुनै जानकारी नआएको प्रहरीले जनाएको छ । यसअघि हिजो बिहान बिहान दार्चुला केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको थियो । बिहान ९ : ४८ बजे गएको भूकम्प ४.२ रेक्टरस्केल मापन गरिएको छ ।
त्यस्तै पुष २७ गते मात्र काठमाडाैं उपत्यकामा भूकम्पको धक्का महसुश गरिएको थियो। काठमाडाैंको कुलेश्वर केन्द्रबिन्दु भएर सोमबार भूकम्पको धक्का महसुश गरिएको हो ।
दिउँसो २ बजेर ३२ मिनेटमा ३ दशमलव १ रेक्टर स्केलको परकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ । परकम्पको धक्का कुलेश्वरसहित आसपास र ललितपुरका केही क्षेत्रमा महसुस गरिएको थियो । मध्य काठमाडौंमै केन्द्रविन्दु रहेकाले वरपरका बासिन्दाले धक्का महसुस गरेका थिए।
२०७२ साल वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएर गएको ७ दशमलव ८ रेक्टर स्केलको भूकम्पको परकम्प अझै पनि गइरहेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ । यसैबीच दुई दिनदेखि काठमाडाैं उपत्यकामा दिउँसो गर्मी अनुभव हुन थालेको छ ।
यस्तै तराईमा आउँदो शुक्रबारसम्म बिहानको बेला बाक्लो हुस्सु लाग्ने सम्भावना भएकाले सावधानी अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन् । पूर्वदेखि पश्चिम तराईका धेरै ठाउँमा अस्ति सोमबारदेखि बाक्लो हुस्सु लाग्न थालेको हो ।
बिहान अबेरसम्म बाक्लो हुस्सु लाग्ने र बेलुकीपख हटेर जाने क्रम आउँदो शुक्रबारसम्म कायम रहने मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हिजो र अस्ति तराईका विभिन्न ठाउँमा यस वर्षकै बाक्लो हुस्सु लागेको हो । आज पनि धेरै ठाउँमा बिहानैदेखि हुस्सु लागेको छ । बाक्लो हुस्सु र शीतका कारण तराईको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ ।
यसैबीच काठमाडाैंमा पनि अस्ति सोमबारदेखि आकाश धुम्म हुन थालेको छ । अघिल्लो हप्ता बदली भएर खुलेको आकाश फेरि धुम्म भएको हो । आकाश खुलेपछि काठमाण्डौमा दिउँसो गर्मी अनुभव हुन थालेको थियो । तर अस्तिदेखि दिउँसो चिसो हुन थालेको छ । अस्ति काठमाडाैंको अधिकतम तापक्रम २१ दशमलव ८ डिग्री सेल्सियस रहेकोमा हिजो घटेर १८ दशमलव ६ डिग्री सेल्सियस कायम भएको थियो ।
आज पनि काठमाडाैंको तापक्रम यही हाराहारीमा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । काठमाण्डौमा बाक्लो हुस्सु नलागे पनि बिहानपख कुहिरो र दिउँसो तुवाँलो लाग्ने गरेको छ । काठमाडाैंको मौसमले हवाइ उडानमा असर नगरे पनि तराईमा दिउँसोसम्म बाक्लो हुस्सु लाग्ने गरेका कारण कतिपय उडान रद्द र कतिपय ढिलो हुने गरेका छन् ।
आज पहाडी भेगमा आंशिक बदली रहने र केही ठाउँमा हल्का पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज र भोलि प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशको एक दुई ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ भने बाँकी ठाउँहरुमा मौसम सफा रहने छ ।